Lola Daarfur: Sudaan yakkaa dalagame qorachuu eegalte - BBC News Afaan Oromoo
Lola Daarfur: Sudaan yakkaa dalagame qorachuu eegalte
Bashiir duranuu himannaan irratti dhiyaatera
Bara bulchiinsa pirezedantii duraanii Sudaan Omaar al-Bashiir yakkoota naannoo Daafuritti raawwataman qorachuu eegaluu abbaan alangaa biyyatti hime.
Tagelsiir al-Habeer dhaddacha himannaa kunis biyya biraatti raawwatamu akka danda'an himaniiru.
Waggoota kudhan dura Manni Murtii Yakkoota Idila Addunyaa Bashiir himannaa duguggaa sanyii, yakkaa waraanaa fi yakka sarbama namoomaa dalageera jechuun akka hidhamuuf ajaja itti baasee ture.
Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii akka jedhutti, lolli mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti bara 2003 eegale lubbuu namoota 300,000 galaafate.
Waggoota 30'n darban aangoorra erga turanii booda mormii itti jabaateen Bashiir aangoorraa buufaman.
Biyyattin amma mootummaa ce'umsaa hundeeffatte kananiis loltootaaf miseensota hiriira mormii keessa turaniirraa walitti bahanitu bulchaa jira.
Abbaan alangaa maal jedhe?
Obbo Habeer akka jedhanitti qorannoon Daarfur hoogganaa duraanii Bashiir irratti fuulleffata. Namni kamiyyuu qo'annoo kanarraas bilisa mitii jedhan.
Yakkoota gudeeddiifi ajjeechaa yeroo sanatti raawwataman dabalatee, yakkoonni wayita sana raawwataman hundi ni qoratamu jedhan.
Yoo barbaachisaa ta'ee dhaddachisaa biyya hambaatti jechuun isaa Mana Murtii Yakkamtoota Idila Addunyaa Heeg jiruuf dabarfamu danda'aa yaada jedhu kaasera.
Namoota kuma 300tu du'e , Mil 2 ta'anitu qe'eerraa buqqa'e
Daarfurittii waraanni kan eegalame gosotni gurrachootni Sudaan mootummaan Bashiir Araboonni keessaatti heddummatan moggaatti nu baasera jedhanii lolatti seenani.
Hidhattoota Jaanjaweed jedhaman dabalachuudhaan lotoonni mootumma ajjeechaa, dubartoota gudeeduuf waan argatan saamuu itti fufan.
Namoota miiliyoona lamatu qe'eesaanirraa buqqa'e, quqamtoonni mirgaa Bashiir qabeenyaasaanii gubuudhaan loltoota diina jedhuun weearuuf yaaluun himatan.
Amma Bashiir aangoorraa bu'uun ajjeechaa Daarfuritti raawwatameef dhaddachatti akka dhiyaataniif gaafatamaa jiru.
Jeneraalli humna waraana biyyatti battaluma aangoorra Bashiir bu'aniin muudaman jalqaba tole jechuun dabarfamanii akka qorannoof dhiyaata didaa ture. Gartuun duula mormiirratti hirmaata turan' umbrella protest movement' jedhaman garuu, amma akka dabarfame kennamu fedhu.
Hemetii ,hoogganaa gartuu Janjaweed
Hoogganaan humna tikaa duraan Bashiir sodaatamaa ture Saalaah Goosh jedhamus akka qoratamutu ibsame. Gartuu Basaasaaf odeeffannoo biyyattii kan hooggaanaa ture Saalaah Goosh akkuma Bashiir aangoorra buufameen guyyoota lama booda aangoo gadhiise biyyaa baqate.
Himannaan afur irratti dhiyaachuu gartuun dhaabbata poolisii yakkoomta daangaa qaxxamuranii adamsee seeratti dhiyeessu Interpol qabe gara Sudaanitti deebisuuf sochiin eegalamuu abbaan alangaa biyyatti himaniiru.
Gartuun mirga namoommaaf falmu Human Rights Watch Hemetiin miidhaa namoota nagaarra qaqqabaa ture kanneen akka ajjechaa Jumlaa, gudeeddiif dararaa Darfuuriifi Kibba Kordofaanitti qaqqabe keessatti qooda qabachuun himaata ture.
Hemetiin garuu nageenya hawaasa eeguuf humna akka fayyadame hime.
Suudaan mormii olaanaan jeeqamte
Sudaan: Pirezedantii al Bashiir aangoorra kaafaman maalamatummaan himataman